”Dal sanadkii kun nin laga jaro XUBINTA taranka” – Ma aamini kartid sababta! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Dal sanadkii kun nin laga jaro XUBINTA taranka” – Ma aamini kartid...
”Dal sanadkii kun nin laga jaro XUBINTA taranka” – Ma aamini kartid sababta!
(Brasilia) 26 Abriil 2019 – Madaxwaynaha Brazil, Jair Bolsonaro, ayaa goor dhowayd oo galabta ahayd walaac ka muujiyay kiisaska ragga laga gooynayo xubinta taranka oo faraha kasii baxaysa, taasoo loo sababeeyay nadaafad xumo.
Wuxuu arrintan soo hadal qaaday mar uu booqanayey Wasaaradda Waxbarashada – taasoo uu kaga dhawaaqayey qorshe uu sheegay inuu hadda kaddib uu todobaadkiiba ku booqan doono hal wasaarad, isagoo shir jaraa’id la qabtay Wasiirka Abraham Weintraub.
“Marka aad waynaato wax badan baad baranaysaa. Waxaan ka war helay in ay jiraan rag marka ay musqusha booqdaan aan biyo iyo saabbuun isticmaalin” ayuu yiri Madaxwaynaha oo sheegay inay soo gaartey “xog cabsi badan” oo ah sanadkii 1,000 nin laga jaro guud ahaan ama qayb ahaan xubinta taranka nadaafad xumo darteed.
“Marka ay halkaa gaarto waa inaan kordhinnaa sare u qaadista wacyiga dadka si aan u barno wixii u roon iyaga iyo mustaqbalkooda, waayo waa wax la yaab leh in aannu intaa oo goysmo ah sanadkii marno. ” ayuu yiri Bolsonaro.
Arrintan ayaa ah arrin ay dadka Muslimiinta ihi uga baxsadaan darab qaadashada iyo samaynta hab-raaca nadaafadeed ee diinta Islaamka.
Previous articleAMISOM oo caddaysay xilliga ay Somalia ka baxayso & tillaabo ay qaadday + Sawirro
Next articleAMISOM intensifies Somali security officers training ahead of exit